कुनै आदर्श परिवारहरू छैनन्। प्रत्येक विवाहित युगल चाँडै वा पछि, तर झन्डाहरु, विघटनको अवधि प्रवेश गर्दछ। निस्सन्देह, प्रियजनहरु संग झगडा सजिलो छ, तर त्यहाँ एक ट्रोजन समस्या छ। र यो कहिलेकाहीँ यो भन्दा बढी जस्तो देखिन्छ जस्तो भन्दा धेरै कठिन छ।
ठीक छ, चलो तपाईसँग बुझ्न कोसिस गर्नुहोस् कि तपाईंको पतिसँग कसरी मेलमिलाप गर्ने हो भने, उनीसँग सम्पर्कको आवश्यक बिन्दुहरू कसरी पत्ता लगाउँछन् र तपाइँलाई भविष्यमा त्यहि रेकमा पछाडि नचाहिने के गर्नु पर्छ।
तपाईंको प्रिय संग कसरी मिलाउने? क्रूसको सुरुवात
निस्सन्देह, तपाईंको प्रिय मान्छे, तपाइँ जस्तै, चाँडै वा पछि तपाईंसँग कसरी सम्बन्ध बनाउने बारे प्रश्नहरूको बारेमा चिन्ता गर्न सुरु गर्नुहोस्। तर पुरुषको मनोविज्ञान परिवर्तन गर्न सकिँदैन, र केहि पुरुषहरू पहिले क्रूसमा जान्छन्। सबै पछि, उहाँ परिवारको टाउको हुनुहुन्छ र उहाँको टाउकोमा आफ्नो गल्तीमा आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न पहिलो फिट छैन।
यो ज्ञात छ कि पति पति परिवार मा टाउको छ, र पत्नी गर्दन छ। महिलाहरू सधैं असन्तुष्ट हुन्छन्, तर तिनीहरू परिवारमा सबै जीवनलाई नियन्त्रण गर्छन्।
क्रान्तिको सुरुवातमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको छ कि तपाईलाई सही हुनुहुन्छ कि तपाईंको पति कसरी प्रमाणित गर्नको बारेमा सोच्न चाहानुहुन्छ। जब तपाईं आफैं हरेक दिन दोहोर्याउनुहुन्छ तब मात्र यो परिस्थिति बढाउँछ: "म मेरो श्रीमान् सँगै चाहन्छु। म यसको बिना बाँच्न सक्दैन। " पतिले आफ्नो गलत विचार हालेर आफ्नो जिज्ञासाको सराहना गर्दैनन्।
बुद्धिमानी पत्नीहरूले आफ्नो पतिमाथि विजयी जित्न खोज्दैनन्। आखिर, पुरुषहरु गर्व हो र यस्तो विजय आफ्नो भानुमा हडताल गर्न सक्छ। अनि, उहाँले आफ्नो हार पहिचान भने, उहाँले तपाईंलाई आफ्नो आत्मा को गहिराइमा पकडाउनुहुनेछ, जो तपाईंको पारिवारिक सम्बन्धको भलाइमा असर पार्ने केहि खराब मा परिणत गर्न सक्छ।
एक व्यक्तिसँग कसरी मिलाउनको लागी छनौट गर्ने विकल्प मध्ये एक हुन सक्छ कि तपाइँ एक प्रश्नको उत्तर खोज्ने छैन जुन झगडा उत्पन्न भयो। केही समयको लागि बिर्सनुहोस्, र अझ राम्रो - र सधैंभरि।
सफल बन्दुकको लागि विकल्पहरू
रोमांटिक डिनर व्यवस्थित गर्नुहोस्। तपाईं निश्चित रूपमा तपाईंको मानिसको मनपर्ने व्यञ्जनहरू जान्नुहुन्छ। यदि तपाईं मोमबत्तिले घिमिरे एक बैठकको प्रबन्ध गर्नुहुन्छ भने यो राम्रो हुँदैन। राम्रो शराबको बोतल लिनु।
लगभग 80% पुरुषहरू, सही रूपमा चयन गरिएका शब्दहरू पछि उनीहरूको ठेगानामा, तत्कालमा अपराधहरू बिर्सनुहोस्। र यसले तिनीहरूको पुरुष अहंकारलाई असर गर्दैन। यसको विपरीत, सुलह तिर फर्केर पहिलो कदम लिनको लागी उनीहरूको अन्तस्करणका केही दुखाइहरू पनि महसुस गर्छन्।
यो यस्तो शब्द हुन सक्छ। उदाहरणको लागि, "तपाई मात्र हो जुन केवल मानिस हो जसले मलाई सधैं बाँच्न दिन्छ। तपाईले मलाई बुझ्नुहुन्छ। र म कहिलेकाहीं यसलाई मेरो द्रुत स्वभावको कारण देख्नुहुन्न। मलाई माफ गर्नुहोस्। यस झगडाको बारेमा बिर्सनुहोस्। "
तपाईं, अरू कोही जस्तो जस्तो, तपाईंको पति वर्णन गर्न उपयुक्त उपत्यकाहरू पाउनुहुनेछ।
उदाहरणका लागि, यदि तपाईले पतिलाई माथि उठाउन को लागी लेख्नु भएको छ, त्यसपछि यो विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्।
कूरियरको सहयोगको साथ, तपाई पतिलाई एक पत्र दिनुहुन्छ, जसमा केवल दुइटा जोडीहरू छन्, जसको अर्थ एक हज़ारको लायक छ: "तपाईं मेरो लागि सबै हुनुहुन्छ। म तिमीलाई माया गर्छु। "
अप्रत्याशित उपहार सिर्जना गरेर तपाईंको मायालु एकलाई खुसी पार्न कोसिस गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, उनीहरूलाई लामो समयदेखि सपना देखेका कुराहरू समावेश गरिएको पार्सललाई दिइएको छ। एउटै तत्कालमा, तपाईं आफ्नो पतिलाई एसएमएस पठाउनको लागि पठाउन सक्नुहुनेछ। मनपर्ने हृदयले तपाईंलाई के भन्छ भनेर यो वर्णन गर्नुहोस्। निश्चय गर्नुहोस् कि त्यो तपाईंलाई धेरै आभारी हुनेछ। यदि उहाँले आँसु बगाउनुभएन भने, उसले निश्चित रूपमा अङ्ग्रेजी वा चुम्बन गर्छ।
निस्सन्देह, यदि खराबी को कारण रक्सी को उनको लत थियो, तब यो यसको "लायक" को लायक छैन। यसले अवस्था बढायो। उसलाई कुरा गरौं हृदयमा। उहाँले शंकर पेय पदार्थहरुमा सबै चीजको लागि विकल्प देख्नुभएको कारण पत्ता लगाउनुहोस्। एक साथ समाधान खोज्ने प्रयास गर्नुहोस्।
यदि खराबी को कारण उनको धोखा थियो, तपाईं आफ्नो शर्त को विश्लेषण गर्न को लागि र यदि तपाईं उसलाई क्षमा गर्न मा सक्षम हुनेछ बुझन को आवश्यकता हो। तपाईंको पति संग के थियो गलत बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंको मुख्य कार्य तपाईको विगत जुनून पुनरुत्थान गर्न परिवर्तन गर्न के आवश्यकता छ भनेर बुझ्न हो।
यदि तपाईं जादू, प्रार्थना र आदिको विरोध गर्नुहुन्न भने, त्यसपछि हामी आफ्नो पति संग शान्ति बनाउन एक साजिश प्रदान गर्छौं। यो परिवारमा झगडा सुरु गर्दा यो पढ्नैपर्छ:
"भगवानको सात पक्षीय आमा, कंसोल, दलाल। परमेश्वरको दास (मानिसको नाम) लाई धकेल्नुहोस्, तर मलाई, प्रभु, धैर्य दिनुहोस् र मेरो प्राण, मुक्ति। पिता र छोरा र पवित्र आत्माको नाममा। Amen »
खरेलले कहिल्यै आनन्द पाएनन्। र दुवै दुल्हनहरूको चाहना निर्भर छ कि तिनीहरूले पछाडि पद्धतिहरू पत्ता लगाउन सक्षम छन् कि छैन।
कसरी मानिसबाट टाढा जानुहोस्?
एक्वा एरोबिक्स: व्यायाम
दुई प्रेमीहरूको लागि ट्विन टैटूहरू
के तपाईं एक पोशाक जस्तै एक स्टार चाहानुहुन्छ? टम Lenk यो कसरी गर्ने भनेर थाहा छ!
इमडियम - प्रयोगको लागि संकेत
कलगन-जड़ - ट्रेनेचर
कुकुर खाना Monge-assortment overview
Endometrium आदर्श हो
तपाईं प्रेमको बारेमा कस्तो सपना देख्नुहुन्छ?
वन फोरेस्ट पार्क
काफिरको रातो वजन घटानेको लागि
क्यासेट रोलर ब्लाइन्ड्स
गाजरको सपना कस्तो छ?
कसरी बुझ्न सकिन्छ कि तपाइँ विषम भएको छ?
10 पहिले मेयनेज को बारे मा अज्ञात तथ्यहरु
केथ हर्निंगटन र रोज लेसले पूर्वी इङ्गल्याण्डमा एक पन्द्रहवर्ष शताब्दी हवेली किन्यो
कसरी इभ्रेहरू पर्दा पर्दा पर्दछ?
फ्लोरमा ग्रीष्मकालीन स्कर्टहरू
टाउन हॉल (ओस्लो)
दुई पक्षीय निमोनिया